कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादः ७६ जिल्लाको टुङ्गियो, अब रौतहटको मात्रै बाँकी
नेपाली पब्लिक सोमबार, कात्तिक २२, २०७८
नेपाली कांग्रेसले रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएको छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनका लागि यसअघि ७५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाएको कांग्रेसले आज रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याएको हो ।
कांग्रेस रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गीएसँगै अब रौतहटको मात्र क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिन बाँकी रहेको छ । रसुवामा नयाँ शक्तिबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका व्यक्तिलाई कति क्रियाशील सदस्यता दिने भन्ने विवादका कारण क्रियाशील सदस्यता टुङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।
कांग्रेस रसुवाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिएसँगै रसुवामा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या तीन हजार ८५७ पुगेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले एक÷दुई दिनमा देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गोमा पुग्ने बताए ।
रौतहट क्षेत्र नं २, ३ र ४ को क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिसकेको भए पनि क्षेत्र नं १ को भने टुङ्गिन बाँकी रहेको कांग्रेसले जनाएको छ । रौतहटको तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएसँगै देशभरका १६५ मध्ये १६४ निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लागेको हो ।
कांग्रेसले पछिल्लो समय सदस्यता विवाद टुङ्गोमा पु¥याएको जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका समेत प्रकाशित गरिसकेको छ भने सोही जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत समेत खटाइसकेको छ ।
कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौँमा गर्दैछ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक २२, २०७८ १५:५२
शुक्रबार, माघ ७, २०७८ १७:१६ राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ? (पूर्णपाठ)
शुक्रबार, माघ ७, २०७८ १७:१० थप १० हजार ७०३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
उपत्यकामा जोरबिजोरः कुन सवारी साधनमा लागू हुन्छ ? कुनमा हुँदैन ? (सूचीसहित)
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले के भने ? (पूर्णपाठ)
थप १० हजार ७०३ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि